Fisafidianana novelista misy
fianjera menio zaza
Fanamarihana novelista misy
Ink Sympathetic, nataon'i Patrick Modiano
Ao anatin'ny trosany tsy mety ritra hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Fotoana feno tantara mahafinaritra rehefa mandeha ara-potoana isika, i Modiano dia mitarika antsika amin'ny teti-dratsy izay mamerina ilay hevitra nostalgia momba ny ephemeral. Amin'ny hevitra momba ny mety ho trace izay azontsika, na…
The Island of the Lost Tree, nataon'i Elif Shafak
Samy manana ny voany ny hazo rehetra. Avy amin'ny hazo paoma miaraka amin'ny fakam-panahy taloha, ampy hanesorana antsika amin'ny paradisa, ka hatramin'ny aviavy mahazatra miaraka amin'ny voany tsy fahita firy feno marika famantarana eo amin'ny erotika sy ny masina, miankina amin'ny fomba fijerinao azy ary indrindra indrindra, miankina amin'ny iza no mijery azy... Tantara ao amin'ny ...
Ny boky 3 tsara indrindra nosoratan'i Juan Carlos Onetti
Ny Juan Carlos Onetti tsy mety may, miaraka amin'i Mario Benedetti sy Eduardo Galeano, dia mandrafitra triovirate literatiora iray avy any Uruguay iraisana ka hatrany amin'ny Olympus misy litera amin'ny Espaniôla. Satria eo anelanelan'ny telo dia mandrakotra ny zava-drehetra izy ireo, na inona na inona karazana amin'ny prosa, andininy na eny an-tsehatra. Na dia manolotra izany aza ny tsirairay ...
Amin'ny fahavaratra, nataon'i Karl Ove Knausgård
Ny tantaran'ny fiainana ao anatin'ny fivoarany mihodinkodina amin'ny fizaran-taona dia manamarika ny fidirana sy fivoahana tsy misy dikany amin'ny sehatra tsirairay. Fanamby ho an'ny fahavelomana ny teraka amin'ny ririnina taloha. Amin'izao fotoana izao dia zara raha anekdota miharihary izany, raha jerena ny ezaka nataon'i Karl Ove Knausgard ...
Ho an'ilay miandry ahy hipetraka amin'ny maizina, avy amin'i Antonio Lobo Antunes
Ny fanadinoana dia manana hanina hanadinoana ny taratry ny tenany manokana ho toy ny rafitra fiarovana, izay hamoahana an'io karazana solonika simulated io ho toy ny eritreritra izay ampitaina amin'ny fisaintsainantsika. Izany no fandikana sarotra indrindra alohan'ny fijerintsika manontany tena. Mety ho izany, a ...
Ny fon'ny Triana, nataon'i Pajtim Statovci
Tsy mandeha ny zavatra momba ny manodidina an'i Triana malaza sy mahira-tsaina. Na dia manondro zavatra mitovy amin'izany aza ny lohateny. Raha ny marina, ny Pajtim Statovci tsara taloha dia mety tsy hihevitra izany ho sendra izany akory. Ny fon'i Triana dia manondro zavatra hafa tsy mitovy, amin'ny taova azo ovaina, amin'ny zavaboary iray izay, ...
Irery aho ary tsy hanao fety, avy amin'i Sara Barquinero
Marina fa sarotra ny mahita feo vaovao miresaka fitiavana miorim-paka amin'ny vitalism, miaraka amin'ny filozofia, miaraka amin'ny fihoaran'ny hoditra na avy amin'ny orgasme aza. Ary io olana io dia fanamby fitantarana iray manontolo izay ahafahan'ny mpanoratra na ny mpanoratra adidy asehony, raha tsy ...
Ny Fianakaviana Martin, nataon'i David Foenkinos
Na dia manaloka ny tenany ho tantara mahazatra aza dia efa fantatsika fa i David Foenkinos dia tsy miditra amin'ny fomba na fifandraisana eo amin'ny samy mpianakavy amin'ny fikatsahana tsiambaratelo na lafiny maizina. Satria ny mpanoratra frantsay malaza eran-tany dia mpandidy ny litera miendrika endrika sy ...
Ireo boky 3 tsara indrindra nataon'i Emil Cioran
Tsy misy pessimist resy lahatra tanteraka mahatratra 84, toy ny nitranga tamin'i Cioran. Izany no antony ilazako izany satria tapa-kevitra ny hanondro an'ity mpanoratra ity ho nihilista maloto iray izay manana endrika ratsy sy tahotra ny fiainana mandrafitra endrika sy votoatin'ny fitantarana mifanitsy amin'ny fanamelohana ny fiainana. ...
pejy1 pejy2 ... pejy5 manaraka →